नयाँ मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् रियलमीका उत्कृष्ट पाँच स्मार्टफोन - आर्थिक पाटी
नयाँ मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् रियलमीका उत्कृष्ट पाँच स्मार्टफोन
२०७८-०१-१८ बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं । स्मार्ट फोन क्षेत्रमा लोकप्रिय रियलमीले विभिन्न सिरिजका फरक मूल्य पर्ने स्मार्टफोन उत्पादन गर्दै आएको छ ।
नम्बर सिरिज देखि सी सिरिजसम्मको यात्राका दौरानमा इन्ट्री लेबलका स्मार्ट फोन देखि मिड रेंज उपकरणहरुको उत्पादन कम्पनीले गर्दै आएको छ । रियलमीले उत्कृष्ट ब्याट्री प्रविधि, प्रोसेसिङ पावर, नवीनतम् क्यामेरा, डिस्प्ले सहितलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताउँदै आइरहेको छ ।
‘उन्नति देखि चुनौती सम्म’ को मूल एजेण्डा सहित मोबाइल फोनको क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति देखाइरहेको रियलमीले नयाँ मोबाइल किन्न चाहने ग्राहकका लागि आफ्ना ५ वटा उत्पादनबारे बताएको छ ।
रियलमी, सातौ सिरिज (रियलमी सेभेन/सेभेन आई)
रियलमी सेभेन र सेभेन आई दुबै स्मार्टफोन बजारमा रुचाइएका मध्ये पर्दछन् । यस फोनामा उपलब्ध फिचर सबैभन्दा रुचाइएको कम्पनीको दावी छ । रियलमीका यो फोन ८ जीबी &yen;याम, १२८ जीबी फोन मेमोरी र पर्याप्त ब्याट्री प्रदर्शनका साथ उपलब्ध छन् । यसैगरी, यसमा तीव्र चार्जिङ प्रविधि पनि छ, जसकारण केबल २६ मिनेटमा ५० प्रतिशत चार्ज गर्न सम्भव छ ।
क्यामेरा अर्को पक्ष हो जसले यस सिरिजको शृङ्खलामा रियलमीलाई उत्कृष्ट बनाएको छ । यसमा प्रयोग भएको ६४ एमपी सेन्सर क्यामेराले फराकिलो कोणका साथ सर्वश्रेष्ठ तस्विर खिच्ने क्षमता राख्छ । यसमा रहेको स्टेरी मोडले रातिको समयमा ताराहरुले भरिएको आकासको सुन्दर तस्वीर निकाल्न सक्छ । रियलमी सेभेनको मूल्य ३५ हजार ९ सय ९० र रियलमी सेभेन आईको मूल्य २९ हजार ९ सय ९० रहेको छ ।